भर्ना गराएर आफन्त वेपत्ता भएपछि मृत्यु पश्चात् सम्पर्कमा आए छोरा
राजविराजस्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अंचल अस्पतालमा तीन दिनअघि एक बृद्धालाई उपचारका लागि भर्ना गराएर आफन्त वेपत्ताभएपछि ती बृद्धाको मृत्यु पश्चात् उनका छोरा सम्पर्कमा आएका छन् ।
अस्पतालको वेड नं. ५ मा उपचारका लागि भर्ना गराएकी राजविराज २ निवासी ५५ वर्षिया बच्चिदेवी झाको मंगलबार बिहान मृत्यु भएपछि उनका छोरा सम्पर्कमा आएका छन् ।
मृतक झालाई उनका आफन्त रामप्रसाद नाम बताउने व्यक्तिले आइतबार बिहान पेट दुखेको भन्दै अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा भर्ना गराएर वेपत्ता भएका अस्पतालले जनाएको छ ।
मंगलबार बिहान मृत्युपछि अस्पतालमा दिएको ठेगानामा सम्पर्क गर्दा कोही आफन्त फेला नपरेको अस्पतालमा ड्युटीरत प्रहरी हवल्दार रमाशंकर यादवले जानकारी दिएका छन् । भर्ना भएका दिन उपचारमा संलग्न चिकित्सकले जाँचका क्रममा महिलामा मृगौला रोगको गम्भिर लक्षण देखिएको भन्दै ती महिलालाई लिएर आउने व्यक्ति रामप्रसादलाई केही औषधी किने ल्याउन भनेको थियो । तर, औषधी किन्न पूर्जा लिएर गएका रामप्रसाद फर्केर नआएको हवल्दार यादवले बताए ।
यता महिलाको अवस्था नाजुक बन्दै गएपछि उपचारमा संलग्न डा. कल्पना साह आफ्नै खर्चमा तत्काल आवश्यक पर्ने केही औषधी किनेर उपचार सुरु गरेका थिए । कोही आफन्त नआउँदा अस्पतालमा ड्युटीरत हवल्दार यादवले ती महिलाको तीन दिनसम्म स्याहार, सुसार गर्दै पोषिलो खानेकुराको व्यवस्था पनि गरिदिदा समेत उनलाई बचाउन नसकिएको डा. साहले बताइन् ।
डा. साहले ती बृद्धाको मृगौलामा गम्भिर समस्या देखिएपनि भ्याएसम्म सहयोग र बचाउने प्रयास गर्दा गर्दै बचाउन नसकिएको बताइन् ।
यस्तै अस्पतालमा मेडिकल सुपरिडेन्टेन्ट डा. चुमनलाल दासले मानविय संवेदनशिलताका कारण यसरी भर्ना भएका बिरामीहरुलाई समय समयमा सेवा प्रदान गर्दै गरेको जानकारी दिए । यसैबीच मृतक महिलाका छोरा अनिल झाले मंगलबार साँझ शव बुझेर लगेका छन् । उनले आमा आफुहरुसँग छुटेर अन्यत्रै बस्ने गरेको र कसले अस्पताल भर्ना गराएको त्यो पनि थाहा नभएको बताए । उनले प्रहरीले आफन्त खोज्दै जाँदा मात्र आफूहले थाहा पाएको बताए ।